Abstract: Fiaraha-miasa, kinova ary fanolorana ireo volavolam-bokinao | Martech Zone
Miara-miasa amin'ny orinasam-pirenena isika izao hampandroso modely mailaka Marketing Cloud natokana ho azy isaky ny sampana sy orinasa. Satria lavitra ny mpiray antoka sy ny mpifanaraka ary ny mpamorona, dia namorona ny fanesoany ilay mpamorona ary niasa tamin'ny kinova niaraka tamin'ny ekipany mpitarika izy - avy eo natolony ny ekipanay ho an'ny kaody sy ny fampiharana azy.
Nampahafantatra ahy an'i Abstract ilay mpamorona. Abstract dia fitaovana fiaraha-miasa an-tserasera ho an'ny Mac izay ahafahan'ny orinasanao, ny mpiantoka anao ary ny mpanjifanao mitantana, manaova kinova ary mandrafitra endrika amina toerana iray.
Topimaso momba ny Abstract
Mba hanovana na famoronana rakitra fisainana dia mila manao izany ianao ampidino ny rindrambaiko macOS desktop. Mba hizarana sy ahazoana hevitra, ny app desktop dia mifanindry miaraka Fampiharana web an'ny Abstract.
Ny fizotran'ny workflow Abstract
Abstract dia ahafahan'ny ekipanao miasa avy amin'ny tompona, sampana, iaraha-miasa, manome valiny hatrany hatrany hanomanana ny famolavolana vokatra ekenao amin'ny famokarana.
Import - manafatra Sketch ary Adobe XD fisie ary mamorona toerana afovoany eo noho eo ho an'ny asa famolavolana farany sy antontan-taratasy manohana anao.
miara-miasa - Atombohy ny fikarohana iray amin'ny alàlan'ny famoronana rantsan'ny tompony iray hamolavola amin'ny sehatr'asa mitovy. Ny sampana dia toerana azo antoka izay ahafahanao sy ny mpamorona hafa miasa amin'ny rakitra mitovy amin'ny fotoana iray, nefa tsy mifanindry ny asan'ny tsirairay na misy fiantraikany amin'ny tompony.
Ankino - Raketo an-tsoratra ary tahirizo ny asanao miaraka amina tontolon-kevitra fanampiny, fananganana antontan-taratasy rehefa mandeha ianao. Ny fampidirana naoty momba izay nataonao sy ny antony dia ampahany amin'ny fitehirizana ny asanao ao Abstract.
Feedback - Mangataha valiny amin'ny mpamorona sy mpandray anjara hafa, mivantana amin'ny asa. Ny fanehoan-kevitra sy ny fanamarihana dia voarakitra ao amin'ny solaitrabe ho mora tohina.
Version - Aorian'ny fankatoavana ny volavola ary vonona ny handroso, ny dingana manaraka dia ny manambatra, na manampy, ny fanovana nataonao ho tompo. Azonao atao ny mampitaha ny kinova hafa amin'ny arisialy alohan'ny hanapahanao hevitra hoe inona no fanovana tianao hotehirizina hifehezana ary iza amin'ireo tsy tianao. Ary, raha miova hevitra ianao na manao fahadisoana dia afaka miverina amin'ny kinova teo aloha foana ianao.
Production - Asa tetezamita manomboka amin'ny famolavolana mankany amin'ny fampandrosoana mivantana avy any Abstract. Afaka mampitaha ny fanovana, ny fandrefesana ary ny fampidinana fananana ireo mpamorona - avy amin'ny rohy iray. Ny fidiran'ny mpijery ihany no ilain'izy ireo (ary maimaim-poana izany).
Abstract dia manolotra fanomezana mahazatra sy enteprise.
Atombohy ny fitsapana tsy maharitra 14 andro anao Fandaharam-potoana Demo momba ny Enterprise Abstract
Tags: saro-takarinaAdobe XDfamolavolanahevitra momba ny famolavolanamaketyfamolavolana vokatrahevitra momba ny famolavolana vokatraSketchuiui hevitrafamolavolana interface tsara ho an'ny mpampiasaversion control